नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैकाे मृ-त्यु ! (हेर्नुहाेस् विवरण सहित) – List Khabar
Home / समाचार / नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैकाे मृ-त्यु ! (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)
admin February 1, 2022 समाचार Leaveacomment 244 Views
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५५८३ जनामा को- रोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १७ हजार ६७४ जनाको नमुना परीक्षण भएको थियो । हाल देशभर सक्रिय संक्रमित ७४ हजार ६५३ जना रहेका छन् ।
सोही अवधिमा ९ जनाको मृ- त्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित हुने भन्दा निको हुने धेरै देखिएका छन् । अर्थात पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार २६७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यसैबीच पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा को- रोना संक्रमितको कुल संख्या ९ लाख ५७ हजार ५७० र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा संक्रमितको कुल संख्या १ लाख ३० हजार ६८१ जना पुगेको छ । संक्रमितमध्ये हालसम्म ८ लाख ७१ हजार १६५ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ३ लाख ९९ हजार जनाले को- रोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा १९०७ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १४०४, भक्तपुरमा १९५ र ललितपुरमा ३०८ संक्रमित थपिएका हुन् । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा ४४ हजार ५३१ सक्रिय संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा २९५२०, ललितपुरमा ९७२३ र भक्तपुरमा ५२८८ सक्रिय संक्रमित छन् ।
Previous यी हुन् कहिलै प्रेममा धोका नदिने ५ राशिका युवती, हुन्छन् समझदार यी हुन् कहिलै प्रेममा धोका नदिने ५ राशिका युवती, हुन्छन् समझदार
Next पुनः जनगणना गर्न सांसदहरुको माग